Dalladda SONSAF Ayaa Magaalada Caynabo Ku Qabatay Kulan Lagu Lafo Gurayay Caqabadihii Ka Hor Yimid Dumarka Doorashadii Dalka Ka Dhacday – SONSAF
Dalladda SONSAF Ayaa Magaalada Caynabo Ku Qabatay Kulan Lagu Lafo Gurayay Caqabadihii Ka Hor Yimid Dumarka Doorashadii Dalka Ka Dhacday
Dalladda SONSAF oo wali sii wadda kulammadii ay u qabanaysay bulshada kala duwan ee gobollada bariga Somaliland, ayaa maanta kulan lagu falanqaynayay caqabadihii ka hor yimid dumarkii u tartamay doorashadii dalka ka dhacday, ugu qabatay magaalada Caynabo dumar ka kala socday saddexda xisbi ee Somaliland, dumarkii ololaha ka qayb qaatay iyo kuwa kale ee siyaasadda xiiseeya.
Intii uu socday Kulankani waxa si laysla soo qaaday waxyaabaha dumarka ka hortaagaan in ay xisbiyada ay ka tirsan yihiin mansab fiican ka qabtaan iyo sababaha loo waayay qof dumar ah oo hankaa yeelata, haddii ay jirtana waxa ka hor taagan iyo sababaha looga gudbi karo.
Waxaana, isku celcelin badan kadib lagu soo gunaanaday in caqabadaha ay ugu horreeyaan
1. Dhaqaale la’aan
2. Dumarka oo iyaga laftoodu aan waxba isku ogolayn.
3. iyo Madaxda xisbiyada oo aanay ka go’nayn in ay dumarka taageeraan.
Dalladda SONSAF ayaa dumarkii u sharraxnaa golayaasha deegaanka iyo wakiillada doorashadii isku sidkanayd ee dalka ka dhacday waxa ay fidisay taageero dhaqaale. Dalladda ayaa dumarka ka teegeraysay dhinacyada kirada xafiisyadii ay ku shaqaynayeen ee ololaha, alaabta daabacaadda ah ee kala duwanayd sida garamaanta, istiikarrada, boodhadhka waaweyn ee lagu dhajinayay waddooyinka IWM.